မိန်းကလေးတိုင်း ပြေးမလွတ်သော ချင်း (ဂျင်း) - ၅ မျိုး -
မိန်းကလေးတိုင်း ပြေးမလွတ်သော ချင်း (ဂျင်း) – ၅ မျိုး
Posted on November 29, 2018 Author Christina Rosy	Comment(0)
သိသိကြီးနဲ့ အမိခံသော… 😀 :’D
ချင်း(ဂျင်း)ထည့်ခံရတဲ့ ခံစားချက်က ခရပ်ရှ် ဂန့်သွားတာထက် ပိုဆိုးမယ်။ ခေတ်ကာလကလည်း ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုတည်း ဦးစားပေးတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ ချင်း(ဂျင်း)တွေက အတောင့်လိုက် အဆစ်လိုက် ထည့်ခံရတော့တာပဲ။ ချင်း(ဂျင်း)တကာ့ ချင်း(ဂျင်း)တွေထဲကမှ ယောင်းတို့ အက်ဒမင်တို့ မိန်းကလေးတွေ ပြေးမလွတ်တဲ့ ချင်း(ဂျင်း) ၅ မျိုးကတော့…
အချစ်ချင်းကတော့ ချင်းတွေထဲမှာမှ အချိုဆုံးချင်းပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူဖြစ်ဖြစ်၊ ခရပ်ရ်ှဖြစ်ဖြစ် ချင်းထည့်လာတဲ့အခါ မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး စားမိတဲ့ အခိုက်အတန့်လည်း ရှိကြမှာပါ။ “ကိုယ်ချစ်တာ မင်းတစ်ယောက်တည်းပါ”၊ “မင်းကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်တတ်တော့ဘူး” စတာတွေက အထင်ရှားဆုံး အချစ်ချင်းတွေပေါ့..
ရှော့ပင်းထွက်လို့ ဒစ်စကောင့်ဆိုတာကြီး မမြင်လိုက်နဲ့ တန်းငမ်းတော့တာပဲ။ ဘာကြောင့်ဒစ်စကောင့်ချလဲ၊ ပစ္စည်းသန့်လား၊ မသန့်လား ဒါတွေ ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူး။ ချင်းမိတော့လည်း ဒစ်စကောင့်ရတဲ့ ချင်းပဲ။ သိပ်မပဲ့သွားဘူးလေ..
Related Article >>> ယောက်ျားလေးတွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့ ဂျင်းစကားကြီး (၅)ခွန်း
ကလေးကအစ ခွေးအဆုံး ရီဗျူးရေးတဲ့ ခေတ်ဆိုတော့ ရီဗျူးတွေက သိပ်ပေါ။ အဆိုးဆုံးက အစားအသောက်ရီဗျူးပေါ့။ ဘယ်ဆိုင်က ဘယ်လို စားကောင်းတာ၊ ကဏန်းက ဆင်လောက်ကြီးတာတွေရော၊ ဟော့ပေါ့က ဇလားနဲ့ချတာတွေရော အစုံပါပဲ။ ယုံချင်စရာမကောင်းတောင် တစ်ခါလောက်ယုံပြီး ချင်းထည့်ခံလိုက်ရမှ ကိုယ်တွေက အစာကြေတာ။
သူစိမ်းတွေပဲ ချင်းထည့်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ မာတာမိခင်တွေကလည်း ချင်းထည့်တဲ့ နေရာမှာ ဆရာတစ်ဆူပါ။ ဥပမာပြောရရင် အမဲသားမကြိုက်တဲ့ အက်ဒမင့်ကို အမဲသားတုံးကြီးကို ဆိတ်သားလို့ လိမ်ကျွေးတာမျိုး။ ကိုယ်တွေကလည်း မစားရှာပါဘူး။ ရှလွတ်ခနဲပဲ။ တခြားချင်းတွေရှိသေးတယ်။ သီတင်းကျွတ်ကန်တော့လို့ ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို သိမ်းပေးမယ်ပြောပြီး ဂါထာနဲ့ဖျောက်လိုက်တာ ဘာညာပေါ့။
Related Article >>> မုန်းဖို့ကောင်းသော ဧည့်သည်(၇)မျိုး
အက်ဒမင်ကြိုက်တဲ့ ချင်းပါ။ ဘယ်နှစ်ခါပဲ ချင်းထည့်ခံရခံရ အမှတ်သည်းချေမရှိဘဲ မှာလို့ ကောင်းတုန်းပါပဲ။ အခုလည်း ဖိနပ်တစ်ရံ၊ အိတ်တစ်အိတ် မှာထားသေးတယ်။ ဖက်တင်းလို့ပြောသွားပေးကြပါ T.T
ကဲ..ကဲ..ချင်းတွေအကြောင်းပြောရင် ဒီနေ့အဖို့ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ ယောင်းတို့လည်း အဲဒီချင်းတွေကို….သတိထားပါလို့ မပြောတော့ဘူး။ အက်ဒမင်နဲ့ အတူတူ ချင်းတောထဲ ပျော်ပျော်ကြီး တိုးဝင်ကြမယ်နော် ယောင်းတို့။
သိသိကွီးနဲ့ အမိခံသော… 😀 :’D
ခငျြး(ဂငျြး)ထညျ့ခံရတဲ့ ခံစားခကျြက ခရပျရျှ ဂနျ့သှားတာထကျ ပိုဆိုးမယျ။ ခတျေကာလကလညျး ကိုယျကြိုးတဈခုတညျး ဦးစားပေးတဲ့ ခတျေဆိုတော့ ခငျြး(ဂငျြး)တှကေ အတောငျ့လိုကျ အဆဈလိုကျ ထညျ့ခံရတော့တာပဲ။ ခငျြး(ဂငျြး)တကာ့ ခငျြး(ဂငျြး)တှထေဲကမှ ယောငျးတို့ အကျဒမငျတို့ မိနျးကလေးတှေ ပွေးမလှတျတဲ့ ခငျြး(ဂငျြး) ၅ မြိုးကတော့…
အခဈြခငျြးကတော့ ခငျြးတှထေဲမှာမှ အခြိုဆုံးခငျြးပါ။ ကိုယျ့ခဈြသူဖွဈဖွဈ၊ ခရပျရျှဖွဈဖွဈ ခငျြးထညျ့လာတဲ့အခါ မကျြလုံးစုံမှိတျပွီး စားမိတဲ့ အခိုကျအတနျ့လညျး ရှိကွမှာပါ။ “ကိုယျခဈြတာ မငျးတဈယောကျတညျးပါ”၊ “မငျးကလှဲရငျ ဘယျသူ့ကိုမှမခဈြတတျတော့ဘူး” စတာတှကေ အထငျရှားဆုံး အခဈြခငျြးတှပေေါ့..
ရှော့ပငျးထှကျလို့ ဒဈစကောငျ့ဆိုတာကွီး မမွငျလိုကျနဲ့ တနျးငမျးတော့တာပဲ။ ဘာကွောငျ့ဒဈစကောငျ့ခလြဲ၊ ပစ်စညျးသနျ့လား၊ မသနျ့လား ဒါတှေ ဘာမှအရေးမကွီးပါဘူး။ ခငျြးမိတော့လညျး ဒဈစကောငျ့ရတဲ့ ခငျြးပဲ။ သိပျမပဲ့သှားဘူးလေ..
Related Article >>> ယောကျြားလေးတှေ ပွောလရှေိ့တဲ့ ဂငျြးစကားကွီး (၅)ခှနျး
ကလေးကအစ ခှေးအဆုံး ရီဗြူးရေးတဲ့ ခတျေဆိုတော့ ရီဗြူးတှကေ သိပျပေါ။ အဆိုးဆုံးက အစားအသောကျရီဗြူးပေါ့။ ဘယျဆိုငျက ဘယျလို စားကောငျးတာ၊ ကဏနျးက ဆငျလောကျကွီးတာတှရေော၊ ဟော့ပေါ့က ဇလားနဲ့ခတြာတှရေော အစုံပါပဲ။ ယုံခငျြစရာမကောငျးတောငျ တဈခါလောကျယုံပွီး ခငျြးထညျ့ခံလိုကျရမှ ကိုယျတှကေ အစာကွတော။
သူစိမျးတှပေဲ ခငျြးထညျ့တာ မဟုတျဘူးနျော။ မာတာမိခငျတှကေလညျး ခငျြးထညျ့တဲ့ နရောမှာ ဆရာတဈဆူပါ။ ဥပမာပွောရရငျ အမဲသားမကွိုကျတဲ့ အကျဒမငျ့ကို အမဲသားတုံးကွီးကို ဆိတျသားလို့ လိမျကြှေးတာမြိုး။ ကိုယျတှကေလညျး မစားရှာပါဘူး။ ရှလှတျခနဲပဲ။ တခွားခငျြးတှရှေိသေးတယျ။ သီတငျးကြှတျကနျတော့လို့ ရလာတဲ့ ပိုကျဆံတှကေို သိမျးပေးမယျပွောပွီး ဂါထာနဲ့ဖြောကျလိုကျတာ ဘာညာပေါ့။
Related Article >>> မုနျးဖို့ကောငျးသော ဧညျ့သညျ(၇)မြိုး
အကျဒမငျကွိုကျတဲ့ ခငျြးပါ။ ဘယျနှဈခါပဲ ခငျြးထညျ့ခံရခံရ အမှတျသညျးခမြေရှိဘဲ မှာလို့ ကောငျးတုနျးပါပဲ။ အခုလညျး ဖိနပျတဈရံ၊ အိတျတဈအိတျ မှာထားသေးတယျ။ ဖကျတငျးလို့ပွောသှားပေးကွပါ T.T
ကဲ..ကဲ..ခငျြးတှအေကွောငျးပွောရငျ ဒီနအေ့ဖို့ ပွီးမှာမဟုတျဘူး။ ယောငျးတို့လညျး အဲဒီခငျြးတှကေို….သတိထားပါလို့ မပွောတော့ဘူး။ အကျဒမငျနဲ့ အတူတူ ခငျြးတောထဲ ပြျောပြျောကွီး တိုးဝငျကွမယျနျော ယောငျးတို့။
Tagged Believe, cheat, Fun, Ginger, Kidding, Once, words
အစားပုတ် is real
Posted on February 19, 2017 Author Christina Rosy
Posted on August 24, 2017 Author Hana
ကိုယ်ကလည်းချစ်… သူကလည်းချစ်နေပေမယ့် ရာသက်ပန်လက်တွဲဖို့ကလည်း ကြောက်နေကြတဲ့အခါ…..
ယောင်းသာ ဒစ်စနေးကမ္ဘာထဲကဆို ဘယ်မင်းသမီးလေးဖြစ်မလဲ?
Posted on February 20, 2018 Author Hnin Ei Oo
အရင်အပတ်က ဒစ်စနေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေကြပြီးပြီဆိုတော့ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ကိုယ်ကဘယ်မင်းသမီးလေး ဖြစ်မလဲဆိုတာ အဖြေရှာကြည့်ရအောင်…
ဘာလို့ ကိုရီးယားက တောင်နဲ့ မြောက်(၂)ပိုင်း ကွဲထွက်သွားရတာလဲ?
ဆောင်းရာသီမှာ ခရီးသွားသင့်တဲ့ အာရှရဲ့ အလှဆုံးနေရာ (၄)ခု